Iran: Abtahi mpitarika reformista tsaraina · Global Voices teny Malagasy
Iran: Abtahi mpitarika reformista tsaraina
Voadika ny 02 Jolay 2018 3:35 GMT
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny 01 aogositra 2009)
Anisan'ireo ampolony manohitra ny voka-pifidianana tamin'ny 12 jona 2009 teo ilay bilaogera mpitari-dalana sady filoha-lefitra reformista Mohmmad Ali Abtahi. Mandeha moa (tamin'ny fotoana nanoratana) ny fitsarana ireo mpanao fihetsiketsehana ao amin'ny Fitsarana ao Tehran.
Hita ho reraka sy very lanja i Abtahi, izay nitafy ny pyjamas-n'ny gadra, tao amin'ny fitsarana. Nilaza tao amin'ny fitsarana i Abtahi, izay nigadra nandritra ny herinandro maromaro sady tsy afa-nifandray tamin'ny tontolo ivelany “Miteny amin'ny namako rehetra sy izay namana rehetra mandre anay aho, fa lainga ny filazana fa misy hala-bato eto Iran ary natao hahatonga an'i Iran ho tahaka an'i Afghanistan sy i Iràka ary hiteraka fahapotehana sy fahasahiranana… ary raha nitranga izany, dia tsy hisy anarana na dian'ny revolisioona tavela.”
Nampangaina ho nandray anjara tamin'ny “fanonganam-panjakana vilory” i Abtahi.
Bilaogera maro no namalu tamin'ny lazaina ho fiaiken'i Abtahi sy ny fisehoany ara-batana. Maro ireo namoaka ny sariny taloha sy taorian'ny fisamborana. (Ambony: havia, talohan'ny fisamborana; havanana, tamin'ny fotoam-pitsarana).
Kaveh Ahangar nilaza fa afa-mahita porofon'ny fampijaliana sy fandrahonana ao ambadiky ny teny mivoaka ny vavan'i Abtahi isika. Nanampy ilay bilaogera fa tamin'ny fahitana an'i Abtahi tamin'ny fahitalavitra, dia nihetsi-po izy ary nitomany.
Alfba nanoratra: “Ry Abtahi, mahafantatra izahay fa tratran'ny fanerena ianao ary mijaly mafy ny fianakavianao. Tokony ho fantatrao izay iaikenao, mbola tia anao izahay. Manohana anao izahay.”
Forever696 nisioka tamin'esoeso fa raha mino ny latsa-bato 24 tapitrisa azon'i Ahmadinejad izahay, dia hino ireny fitsarana ireny.
Saharlar nanoratra “Abtahi no androany, anjaran'iza rahampitso? Mangataka amin'ny mpamaky ny bilaogera tsy ho kivy ka handray itony karazana “fampisehoana” itony ho matotra.”
14 ora izayTiorkia